Stampen oo ay dhaqaale xumo la soo gudboonaatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Stampen oo ay dhaqaale xumo la soo gudboonaatay
La daabacay måndag 23 maj 2016 kl 16.04
Urur-shirkadeedka war-geeysyada ee lagu magacaabo Stampen, uuna qayb ka yahay war-geeyska maalinlaha ee Göteborgs Posten, kana soo baxa magaalada Göteborg ayaa codsaday in dib u habeeyn (rekonstruktion), sida uu urur-shirkadeedku war-saxaafadeed ku soo saaray qoraal saxaafadeed.
– Iminkadan waxay howluhu u socdaan hab wanaag-san oo hor-u-mar leh. Hase yeeshee deeymaha nalagu leeyahay ayaa weli aad u sarreeya, halka aanay khasnadda waxa soo galaanna ku fillayn, sida uu qoraal-saxaafadeed ku qoray madaxa sare ee shirkadda, Martin Alsander.
Codsiga ay shirkaddu u gudbisay maxkamadda degmada ayaa la xiriira dhammaan laamaha kala duwan ee shirkadda ee la xiriira Local Media, howlaha war-geeysyada, Modern Women Media iyo sidoo kale laanta hoos timaada shirkadda ee Stampen AB.
Howl-maalmeedka ayaa sidoodii u socon doona, mana ahan caqabad ey dareemi doonaan akhristeyaashu, sida laga soo xigtay shirkadda Stampen.
Sannadkii tagay ayay shirkadu ka baayac mushtartay miisaaniyad gaarsii-san 3,3 milyaardi oo koronka iswiidhishka, isla-markaana ay ka howl-geleyeen howl-wadeenno gaarsii-san 3 000 oo ruux.